शिवजीसँगको प्रत्यक्ष भेट :: स्वास्थ्य खबरपत्रिका
शिवजीसँगको प्रत्यक्ष भेट
नेत्रलाल अर्याल बुधबार, चैत ४, २०७७, १३:५२:००
हिजो राति शिवजीसँग एकदमै गहन रुपमा छलफल भयो। आजभोलि दिनचर्या कस्तो छ भनी मलाई सोध्नुैभयो। मैले मेरो ठीकै रहेको जानकारी दिएँ। उहाँको दिनचर्याको बारेमा सोध्नै मिल्ने हो कि होइन भन्ने कुरामा म केही क्षण अलमलमा परेँ। मन दह्रो गरेर मैले उहाँको दिनचर्याको बारेमा सोधेँ। उहाँले आफ्नो पनि ठीकै भएको जानकारी गराउनुभयो।
शिवरात्रीको पूर्वसन्ध्यामा उहाँ प्रकट हुनुभएको कारणले गर्दा मलाई यसपालिको शिवरात्रीको तयारीबारे प्रश्नहरु राख्न मन लाग्यो। यसपालिको शिवरात्री अलि फरक किसिमले मनाउने निर्णय लिएको उहाँले बताउनुभयो। केहीबेर अलमल हुँदै मैले फेरि प्रश्न गर्ने आँट गरेँ, र सोधेँ- फरक किसिम भन्ना ले?
प्रसादहरु परिवर्तन गरी मनाउने भन्नेँ उहाँको जवाफ आयो। म अझ उत्साहित हुँदै प्रश्नि राखेँ।
तपाईंको प्रसाद त सबैलाई जानकारी नै छ। यसपालि किन परिवर्तन?
हो, तपाईं सही भन्दै हुनुहुन्छ। धेरै पहिलेदेखि त्यही प्रसादको चलन थियो। आजभोलि मनुष्यहरु प्रसादको नाममा गलत रुपमा प्रयोग गर्न थाले। मानिसहरुमा अस्वस्थकर खानपिन तथा गलत व्यवहारका कारणले धेरै किसिमका समस्या तथा रोगहरु देखापर्न थाले त्यसैले अब फलफूल, दूधजस्ता फाइदाजनक खानेकुराको सेवन गरेर शिवरात्री मनाउनका लागि उहाँले सबैलाई अनुरोध गरेको भन्नेु जवाफ दिनुभयो।
शिवजीका यस्ता उत्प्रेरणासहितका शब्दहरु सुनेर म अचम्मित हुनुका साथै भगवानको प्रत्यक्ष दर्शन पाएर अझ धेरै प्रसन्न भएँ। मलाई यो पल धेरै आनन्द आइरहेको थियो। मलाई प्रत्यक्ष रुपमा शिवजीसँग भेट्न पाउँदा धेरै आनन्द अनुभूति भइरहेको थियो।
मैले फेरि प्रश्न राखेँ। म भाङ, धतुरो, धुमपान केही सेवन गर्दिनँ तर मलाई नै हजुरले किन सम्झाउदै हुनुहुन्छ?
उहाँ मुसुमुसु हाँसेर जवाफ दिनुभयो- मलाई सबैकुरा थाहा हुन्छ। को कस्तो छ, कसले के गर्छ सबै थाहा हुन्छ। तपाईंले सेवन गर्नुहुन्न मलाई थाहा छ। अझ तपाईं सकारात्मक व्यवहार परिवर्तन तथा नसर्ने रोग रोकथामसम्बन्धी अभियानमा जुट्नुभएको देखेँ। तपाईंको त्यो कार्यले धेरै जनामा सकारात्मक व्यवहार परिवर्तनका लागि उत्प्रेरणा मिल्छ। त्यसैले म तपाईंलाई यी सबै कुरा जानकारी गराउँदै छु।
उहाँको कुरा सुनेर म धेरै प्रसन्न भएँ। मैले गरेको कार्यको शिवजीले मूल्याङ्कन गर्नुभएकोमा मलाई भित्रभित्रै एकदमै आभारी अनुभव भइरहेको थियो। त्यसपछि मलाई स्वस्थकर खानपिन र सकारात्मक व्यवहार परिवर्तनको क्षेत्रमा अझ थप कार्य गर्ने प्रेरणा जाग्यो। र, थप कार्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेँ।
यस्तो महत्त्वपूर्ण अवसर पाएकोमा एउटा फोटो खिचेर सामाजिक सञ्जारलमा रङ्ग्याउने इच्छा प्रकट गर्दै मैले फोटो खिच्नका लागि आग्रह गरेँ। उहाँ कुनै सङ्कोचबिना तयार हुनुभयो।
उहाँसँग मेरो जिउ, रङ, उचाइ, तौल, भावना सबै कुरामा मेल खाने थिएनन्। तर पनि केही विचार मिलेर होला सायद त्यो क्षणलाई क्यामरामा कैद गर्नका लागि तयार हुनुभयो।
दुई-चारवटा सेल्फी खिचेर उहाँ बिदा हुनुभयो। म त्यो महत्त्वपूर्ण क्षणका फोटाहरुलाई धेरै बेरसम्म मेरा नयनहरुमार्फत् स्पर्श गरेँ र केही उत्प्रेरणाका शब्दसहित सामाजिक सञ्जामलमा सेयर गर्ने निधो गरेँ।
मनमा धेरै खालका कुराहरु खेल्दै थिए। कति लाइक आउला? के-कस्ता कमेण्टहरु आउलान्? मेरो यो तस्बिर र शब्दले साँच्चिकै मानिसको सकारात्मक व्यवहार परिवर्तन गराउला त? के शिवजीसँग मेरो प्रत्यक्ष भेट भएको कुरा सबैले विश्वास गर्लान् त? म आफैंसँग यी प्रश्न का जवाफ थिएन। तर पनि एउटा कुरामाचाहिँ विश्वास थियो कि शिवजीसँगको तस्बिर हेरेर पक्कै पनि मानिसहरुले मलाई विश्वास गर्ने छन्, र उहाँका ती महत्त्वपूर्ण भनाइले सकारात्मक व्यवहार परिवर्तनका लागि उत्प्रेरणा अवश्य मिल्नेछ।
यी सबै कुराले मानिसका नकारात्मक बानी व्यवहारहरु परिवर्तन हुने ठूलो आशा साथ मनमा कुरा खेल्दै थिए। एक्कासी केही उज्यालोले आँखा खोल्न गाह्रो भएको महसुस भयो। केही बल प्रयोग गरेर आँखा खोलेँ। झ्यालबाट घाम भित्र छिरेको रहेछ। सूर्य उदायको पनि केहीबेर भइसकेको रहेछ। म हतार-हतार विस्ताराबाट उठेर मोबाइल खोलेर लाइक र कमेण्टहरुको गिन्ती गर्न थालेँ। तर मोबाइलमा न त कुनै लाइक थिए, न त कुनै कमेण्टहरु नै।
फेरि मोबाइलको ग्यालरीमा गएर ती तस्बिरहरु खोज्न थालेँ। कतै भेटिएन। मलाई एकदमै अप्ठ्यारो महसुस भयो। त्यस्तो अकल्पनीय, अविस्मरणीय तथा महत्त्वपूर्ण क्षणको तस्बिर मेरो क्यामरामा कैद हुन सकेनछ। यद्यपि, क्यामरामा कैद नभए पनि मेरो यो मानसपटलमा सधैँ कैद भइरहनेछ भन्दै मैले आफैंलाई सान्त्वना दिइराखेँ।
यी सबै कुराहरु त राति निन्द्राका बेला सपनामा भएका गतिविधिका क्षण रहेछन्। सपना नै भए पनि ती क्षणहरु एकदमै अविस्मरणीय थिए। शिवजीसँगको भेट, उहाँले व्यक्त गरेका अभिव्यक्तिहरु तथा मलाई प्रदान गर्नुभएका उत्प्रेरणाले मेरो व्यक्तिगत जीवनमा धेरै ठूलो प्रभाव पार्नेछ।
तपाईंहरुले पनि यी कुराहरु आफ्नो जीवनमा अनुसरण गर्दै निरोगी बन्ने र स्वस्थ समाज निर्माणमा भूमिका निर्वाह गर्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा छ।